Laba ka mid ah xidigaha Arsenal oo sawir ay qolka labiska ku galeen ugu dabaal dagay guushii Man Unied. - Hablaha Media Network
Laba ka mid ah xidigaha Arsenal oo sawir ay qolka labiska ku galeen ugu dabaal dagay guushii Man Unied.
HMN:- Mesut Ozil ayaa bartiisa bulshada ugu dabaal dagay guushii ay kooxdiisa ka gaarta United, waxaana sawirka kala soo muuqday mid ka mid ah gooldhaliyayaasha kulankii ka dhacay Emirates Stadium.
Kubad sameeyaha qaranka jarmalka ayaa sawir ku galay qolka labiska Emirates Stadium iyadoo uu dhinaca kale ka muuqdo Danny Welbeck oo ah xidigii hore Manchester United kaas oo madax awood leh daba mariyay David De Gea.
“#YaGunnersYa! Dhab ahaantii waxaan u ciyaarnay si wanaagsan maanta, Axad wanaagsan, fiid wanaagsan qof walba” ayuu bartiisa bulshada kusoo qoray Mesut” #COYG
Natiijadii ka dhacday Emirates Stadium waxey soo afjartay 25-kulan oo aan dhinaca dhulka loo dhigin Man United, Gunners ayaana boorka ka jaftay rajadoodii afarta sare xilli ciyaareedkaan.